सबै मान्छे नराम्रा हुदैनन्! - Blogs of Sagar Prasai
सबै मान्छे नराम्रा हुदैनन्!
आज भृकुटी मण्डपबाट घर आउनलाई ट्याक्सी खोज्न थाल्यौं। म सँग मेरी साथी पनि थिइन्। क्यान ईन्फोटेकको भीडले गरेर ट्याक्सीहरू धेरै थिएनन्। यस्तैमा एउटा ट्याक्सी कतैबाट आई पुग्यो।
अनि हामीले उसलाई सोध्यौं- “दाई गौशाला तिर जाने हो?”
उनले भने- “हुन्छ।“
म ट्याक्सीको अगाडी पट्टीको सिटमा बसेँ। मेरी साथीले मेरो व्हिलचियर फोल्ड गरिदिईन। अनि मैले ट्याक्सी चालकलाई भने- “दाई यो व्हिलचियर भारी छ। उनले एक्लै सक्दिनन्- तपाई पनि सहयोग गरि दिनु न।“
उनले दिक्क मान्दै झरे। मेरी साथीले व्हिलचियरको एकापट्टिको भाग उचालिन्, उनले अर्को पट्टिलाई यसो छोए जस्तो गरे। भारी व्हिलचियर उचालिएन। ट्याक्सी चालकले भने- यो अँट्दैन जस्तो छ, मेरो गाडीमा।
मैले उनलाई मलाई लान नै मन छैन भन्ने कुरा सजिलै बुझे अनि भने- “ल दाई, छोड्दिनस्, म अर्को मा जान्छु।“
उनले हतार हतार व्हिलचियर छाडेर, गाडी भित्र पसे। म फेरी व्हिलचियर मै सरेँ। उनले जाने बेला फिस्स हाँसेँ जस्तो गरेर भने- “के गर्नु दाई, म लगिदिन्थेँ, तपाईको सामान नै अटेन। ल अर्को मा जानुस् है।“
मैले केही भनिन। उनी गए। मैले मेरी साथीलाई भने- “ठिकै भो उसको मा नगएको हैन?”
उनले भनिन- “हो त। यता व्हिलचियर उठाउन आउँदा नै भन्दै थियो- यस्तो मान्छेलाई लान नै झन्झट हुन्छ। मलाई त्यहि बेला नै नजान मन थियो, तर फेरी अबेर होला भनेर केही भनिन।“
मैले भने- “ट्याक्सी ड्राइभरहरू यस्तै हुन्छन्।“
उनले भनिन- “त्यस्तो हैन नि। एकजना मान्छेबाट ग्रुपलाई नै जेनेरलाईज नगरन।“
मैले भने- “धेरै जसो यस्तै हुन्छन् यार”। मलाई अझै अघिको चालक सँग रिस उठिरहेको थियो।
उनले केही भनिनन्। हामी फेरी ट्याक्सी खोज्न थाल्यौं। अर्को एउटा ट्याक्सी भेटियो।
म फेरी अगाडी पट्टिको सिटमा बसेँ। फेरी उनलाई भने- “दाई यो व्हिलचियर माथि राख्न सघाई दिनु न। भारी छ मेरी साथीले एक्लै सक्दिनन्।“
उनले भने- “भैहाल्छ नि।“
अनि उत्रिएर व्हिलचियर माथि राख्न सघाए। त्यसपछि म मेरी साथी सँग बिदा भएर घर तिर लागेँ।
म अघिको ट्याक्सी चालकको रिसले गरेर केही नबोली बसि रहे। उनले नै सोधे- “ निकै बेर देखी ट्याक्सी खोज्नुभाथ्यो कि? आज यता रोक्नै देको छैन।“
उनको नम्रताले मेरो आधा रिस मर्यो।
मैले भने- “अँ, निकै बेर भयो। एउटा ट्याक्सी भेटेको थिए। चढी सकेर पनि उत्रिएँ। झर्को मान्यो मलाई लान।“
उनले म तिर हेर्दै भने- “तिनिहरू त मान्छे नै हैन दाई।“
उनले नै भने- “आफूलाई कहिले केही हुँदैन भन्ने सोच्छन् दाई कति मान्छे। भोलि केही भएर व्हिलचियरमा हिँड्नु पर्यो भने- उनहरू चाहि कसको ट्याक्सीमा चढ्दा रहेछन्!”
म उनीतिर हेरेर हाँसे।
उनले फेरी भने- “कोहि मान्छे राम्रा हुन्छन्- कोहि हुँदैनन्।
मैले भने- “हो। म पनि धेरै ट्याक्सीमा हिँड्छु- कति एकदमै राम्रो भेट्छु, कति एकदमै नराम्रो।“
उनले मेरो कुरा सुनेर भने- “ट्याक्सी चालक मात्रै किन- सबै कुरामा त्यसतै हो नि हैन र दाई?”
उनको कुरा मलाई गज्जव लाग्यो। मैले हाँस्दै भने- “हो।“
हामीले मेरो घर आईनपुगुन्जेल, धेरै विषयमा कुरा गर्यौं। उनले मलाई आफ्नो परिवार, तरकारी बारी आदि सबैको बारेमा सुनाए। मेरो घर आई पुग्यो। उनले मेरो व्हिलचियर माथिबाट निकाली दिए। म ट्याक्सीबाट व्हिलचियरमा सरे र उनको पैसा तिरेँ अनि भने- “धन्यवाद है दाई। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो।“
उनले मसँग हात मिलाए अनि हाँस्दै हाँस्दै- बिदा भए।
मैले मेरी साथीलाई फोन गरेँ र भने- “अहिलेको ट्याक्सी ड्राईभर त कस्तो राम्रो मान्छे रहेछन्।“
उनले भनिन्- “देख्यौ, मैले भनेको हैन, एक जनाको व्यवहारबाट कुनै समूहलाई नै राम्रो वा नराम्रो भन्नुहुँदैन।“
मैले जिस्किदैं भने-“हो म्याम हो। अब लेक्चर नदेऊ।“
पछि म घर पुगे पछि पनि मैले यो कुरा बारे सोचे। मैले भेटेको कति धेरै राम्रो मान्छे सम्झेँ। उनीहरूले मलाई गरेको मद्दत सम्झेँ। अनि मैले भेटेका कति धेरै नराम्रा मान्छेहरू सम्झे। उनीहरूले मलाई दिएको दुख र पिडा सम्झे।
आजको घटना र यी सबै यादहरूबाट मैले बुझेको कुरा- सबै मान्छे राम्रा हुँदैनन्। सबै मान्छे नराम्रा पनि हुँदैनन्। नराम्रा मान्छेसँग जम्काभेट भाको बेला, यो एकजना पो यस्तो हो त- अर्को फेरी राम्रो भेटि हालिन्छ नि भन्ने सोचेर अगाडी बढ्नु पर्ने रहेछ। अनि बल्ल खुसी भई रहिने रहेछ।